कम्युनिस्ट गठवन्धनको आवश्यकता - TokhaLive
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १२:१४
कम्युनिस्ट गठवन्धनको आवश्यकता
– मनिराज डंगोल
टाेखालाइभ / जेठ २५
नेपालको भुगोलको राजनीति केन्द्र तथा प्राचीन नेपाल उपत्यका हो। नेपालका जिवित सम्पूर्ण पुर्व-प्रधानमन्त्री एक ठाउँमा र केपि ओली एक्लै किन नारायणमान बिजुक्छेंको स्थानमा? राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता कार्यकर्ताहरुले सोच्नुपर्छ । काम सबैले पसिना बगाएर नै गर्ने हो तर काम गरि त्यो ब्यक्ति सफल हुन्छ , जस्ले कामगर्ने शैली फरक अपनाएको हुन्छ। चाहे त्यो राजनीति काममा नै किन नहोस्। कुनै बेला सम्पुर्ण राजनिती कर्मीहरु एकै स्थानमा थिए र उपत्यकाको पद्मरत्न तुलाधर समेत नारायण बिजुक्छेंको टिममा बस्न समेत सकेन। माहोल नै यस्तो बनाइदियो कि अप्राकृतिक र भुगोलको मर्म बिपरित भैदियो। अबिकसित भक्तपुर र ट्वाईलेट बनाउन नजान्ने भक्तपुरेहरु भनी गिज्याउन थाले। तर बर्तमानमा पुर्व प्रधानमन्त्री सबै एकतिर बर्तमान प्रधानमन्त्री एक्लै अर्को तिर किन? यो हो प्राकृतिक गठबन्धन । यो हो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको स्रोत पहिचान। यो हो राजनीतिक स्थायित्व । हामी अब पद्मरत्न तुलाधर भई मन्त्री बन्ने हो कि नारायणमान बिजुक्छें भई समृद्धिको स्रोत पहिचान गरि राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने हो ? सम्पूर्ण प्राचीन नेपालका आदिबासी नेपालीहरुले एकपटक अब सोच्ने बेला आएको छ। लेनिनबादी संगठन औपचारिकतामा मात्रै सिमित भई अवसर लुत्नेमा मात्रै दुरुपयोग नगरौ, राष्ट्र समृद्धिको प्रमुख स्रोत भुगोलमा नै जोडाैं।
नेपालको भू-बनौट नै यस्तो बनेको छ कि देशको भौगोलिक अनुसार पनि प्राचीनकालदेखि काठमाडाैँ उपत्यका राजनीतिकाे प्रमुख केन्द्र बन्दै र रहँदै आएकाे छ। भारतीय भूमि वैशालीदेखिका लिच्छवीहरूले यहीँ आएर राजधानी बनाए। मल्लदेखि शाह, राणा शासकहरूकाे केन्द्र पनि काठमाडाैँ नै रह्याे। त्यस मध्ये पनि यक्ष मल्लकाे कालमा भक्तपुर विविध संस्कृति, सम्पदा साथै अविभाज्य राजनीतिकाे पनि केन्द्र बनेकाे इतिहासले प्रमाणित गर्दछ। वर्तमानमा नेपालका जीवित सम्पूर्ण पुर्व-प्रधानमन्त्रीहरू एकातर्फ र बहालवाला प्रधानमन्त्री अर्काेतर्फ जस्ताे देखिएका बेला भक्तपुरका वरिष्ठ, सम्मानित साथै लोकप्रिय नेता नारायणमान बिजुक्छे उहाँकाे साथमा देखिनु संयाेग मात्रै हुनै सक्दैन।उपत्यकाकाे संस्कृति र सम्पदाकाे सम्मान पूर्वक जगेर्ना गर्दै नैतिक राजनीति बचाउँदै आएका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सम्मानित अध्यक्ष बिजुक्छेबाट यतिबेला एमालेले मात्रै हाेइन, सम्पूर्ण नेपालीले सिक्नु पर्दछ।
श्रम, सीप र कृषि कर्मलाई सम्मानपूर्ण बनाउँदै कृषक परिवारलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सफल नेमकिपाकाे नीतिबाट वर्तमानमा देशले ठूलाे लाभ प्राप्त गरिरहेकाे छ। तर त्यही भक्तपुरलाई वर्तमान विसङ्गतिपूर्ण माहाेलमा उचित स्थान दिन नसकेकाे राजनीतिका महारथीहरूले साेचमा कमजाेरी नै हाे भन्न सकिन्छ।
” उपत्यकाकाे संस्कृति र सम्पदाकाे सम्मान पूर्वक जगेर्ना गर्दै नैतिक राजनीति बचाउँदै आएका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सम्मानित अध्यक्ष बिजुक्छेबाट यतिबेला एमालेले मात्रै हाेइन, सम्पूर्ण नेपालीले सिक्नु पर्दछ।”
त्यसैले फेरि एकपटक भक्तपुर केन्द्रीत ऐतिहासिक स्वर्णयुगकालिन राजनीति परम्पराकाे पुनर्थालनी गराैँ। देशका ७ सय ५३ पालिकाहरूमा त्यसकाे सन्देश पुर्याऔं। प्रदूषित राजनीतिलाई सङ्लाे बनाउँ। नेपाली मजदूर र किसानकाे शिर उँचाे तुल्याऔं ।
सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीयहरूको मायाको खाँचो छ: अर्जुन श्रेष्ठ
२३ श्रावण २०७८, शनिबार १४:०६
गुरू को हुन् ? र उनी किन महान् मानिन्छन् ?
९ श्रावण २०७८, शनिबार ०६:१५
प्रचण्ड जीवनमा जोडिएको एउटा भावुक तस्बिरकाे कथा
३१ असार २०७८, बिहीबार २१:४८
नेपालका चाणक्य , आचार्य चण्डेश्वर
२६ असार २०७८, शनिबार २०:४८
किन उठे नेवार समुदाय ?
२५ असार २०७८, शुक्रबार १८:५१
मूर्ति तथा चित्रकलामा देखिने कुन बाहन कस्का ?
५ असार २०७८, शनिबार ०८:१२